AKHRI:Khudbad Sannadeedka Dastuuriga ah Ee Madaxweynaha JSL Ujeediyay Labada Gole. |
AKHRI:Khudbad Sannadeedka Dastuuriga ah Ee Madaxweynaha JSL Ujeediyay Labada Gole.
Khudbad Sannadeedka Dastuuriga ah Ee
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane, Muuse Biixi Cabdi-25 March 2018
Shir-guddoonka iyo Mudanayaasha labada Gole ee sharafta leh,
Waxa xurmo iyo maamuus ii ah inaan maanta hor-imaaddo labada Gole-baarlamaan ee Jamhuuriyadda Somaliland oo aan ka jeediyo khudbad sannadeedka dastuuriga ah ee 2018.
2. Siyaasadda Arrimaha Dibedda.
3. Dhaqaalaha iyo Horumarka.
4. Kaabayaasha Dhaqaalaha.
5. Arrimaha Bulshada.
6. Maamul-wanaagga iyo Maamul-daadejinta.
7. Garsoorka iyo Cadaaladda.
8. Abaaraha iyo Isbeddelka Cimillada.
Bal u fiirasada, maxaynu ka dhaxalnaa dagaalada beelaha?Waa Qax, waa Goblan, waa Asay, waa Agoon iyo Saboolnimo baahsan, baryo aynu u dirsanno qayrkeen iyo gacmaha oo hoos dhigano.
2. Siyaasadda Arrimaha Dibedda
1. In la helo Ictiraaf Caalami ah.
2. In la sii xoojiyo xidhiidhka aynu la leenahay wadammada deriska ah, Urur Gobolleedka IGAD, Midowga Africa, Wadamada Carabta, Ururka Dalalka Islaamka, Midowga Yurub, iyo Caalamka oo dhan.
3. Inay Somaliland hesho taageero dhaqaale oo dalka lagu horumarinayo (Bi-lateral and multi-lateral support).
4. Inay Somaliland hesho Maalgashi Caalami ah oo toos ah (Direct, Foreign Investment).
3. Dhaqaalaha iyo Horumarka
4. Kaabayaasha Dhaqaalaha
5. Arimaha Bulshada
· In kor loo qaado daryeelka macallinka ee dhinaca nolosha iyo tayada aqoontiisa.
· In aannu ahmiyad weyn siino waxbarashada Farsamada Gacanta, si da’yartu u helaan xirfado ay ku shaqaystaan. Sidaa darteed, waxaannu dib-u-dhis iyo dib-u-habayn ku samayn doonaa dugsiyadii farsamada gacanta Burco iyo Hargeysa. Waxa kale oo aanu hiigsanaynaa in gobol kasta laga sameeyo dugsi farsamo gacan oo bixiya waxbarasho tayo leh.
· Waxaannu dhiirigelinaynaa wax-akhriska ardayda reer Somaliland, Waxaannuna hirgelinaynaa maktabado wax-akhris (Public Libraries).
· Waxa kale, oo dib u habayn iyo tayayn ku samayn doonnaa waxbarashada Jaamacadaha dalka, si ay ula tartamaan dhigooda adduunka.
· Waxaannu kordhin doonaa tirada dhakhaatiirta ee ka hawl-gala guud ahaan dalka, sababta oo ah, marka la eego saamiga dhakhaatiirta iyo dadka bukaanka ah (Patience-doctor ratio), halka dhakhtar ee ka hawl-gala hal goob caafimaad waxa ku soo beegmaya 13,500 oo bukaan ah.
· Waxa xoog la saari doona hubinta takhasuska iyo aqoonta dhakhaatiirta ka hawl-galka dalka Somaliland.
· Waxaannu adkayn doonaa ruqsadda furashada goob caafimaad, si aanay nafta qofka iyo caafimaadka muwaadiniintu u gelin ganacsi.
· Waxaannu dardar gelin doonaa awoodda iyo hufnaanta adeegyada caafimaad ee ay bixiyaan cusbataallada dalku.
· Waxaannu dib-u-habayn iyo tayeyn ku samayn doonnaa Hayadda Ilaalinta Tayada (Quality Control Agency). Si loo hubin karo faya-dhawrka iyo tayada dawooyinka, cuntada iyo dhammaan wixii kiimiko ah ee dalka la keenayo.
Sida la wada og yahay, biyuhu waa hal bowlaha nolosha bini aadamka, meelo badan oo dalka ka mid ahna waxa ka jira baahi biyood oo kala duwan. Cimillada is-badashay waxay keentey roob yaraan. Mar haddii roobkii yaraadayna waxa yimi abaaro is-daba-jooga. Abaarta iyo haraadkuna way isku sidkan yihin. Waxa kala weynaaday haraadka jira iyo awooddeena dhaqaale ee biyo joojinta iyo biyo qodidda.Waa hubaal dalka intiisa badan in ay ka jirto biyo la’aan xooggan. Caasimadda dalku waxay u baahan tahay maalintii lixdan kun oo mitirik tan oo biyo ah. Waxay hadda heshaa sagaal kun oo mitirik tan, oo ku soo baxa si dhib iyo kharash badan.
6. Maamul-wanaagga iyo Maamul-daadejinta
· Wuxuu curyaamiyaa maamul-wanaagga.
· Wuxuu wiiqaa kalsoonida uu shacabku ku qabo hayadaha dawladda.
· Wuxuu lumiyaa adeegyada bulshada loo qabanayo.
· Wuxuu adhax-da ka jebiyaa horumarka.
7. Garsoorka iyo Cadaaladda
8. Abaaraha iyo Isbedelka Cimillada
Waxaan Golayaasha Qaranka, Asxaabta Qaranka iyo guud ahaan dadka reer Somaliland ka dal-banayaa inay gacan iyo taageero ka geystaan, adeegyada bulshada, nabad-gelyada, horumarka iyo isku duubnida Ummadda Jamhuuriyadda Somaliland.